Qarannimadii Lagu Hungoobay:26 Jun/1 Julay 1960!QAad. | WAJAALE NEWS
Qarannimadii Lagu Hungoobay:26 Jun/1 Julay 1960!QAad.
June 29, 2020 - Written by Editor:
“Cabdalloow qasiidadu jir in aanay curinayn caku ma ila garateen” AHUN “Gaariye
1;SNL wuxu ku guuleysatay 20 Mudane
2;USP wuxu ku guuleysatay 12 Mudane
26kii Juun 1960 Somaliland waxay noqotay gobolkii ugu horreeyey ee gobanimo heley. Isla maalinta 26ka Juun waxay dowladdii Somaliland iyo Midowga Boqortooyadii Ingriiska iyo Waqooyiga Ireland heshiiso laba geesood ah oo ay ka mid ahaayeen:
Tixraac Heshiiska dhexmaray Dowladda Soomaliland iyo Midowga Boqortooyada Ingriiska iyo Waqooyiga Ireland ee la xidhiidha Ciidanka Somaliland[Somaliland Scouts]”
2;Tixraac Heshiiska dhexmaray Dowladda Somaliland iyo Midowga Boqortooyada Ingriiska iyo Waqooyiga Ireland eek u saabsana deeqda dhaqaale.
3;Tixraac Heshiiska dhexmary Dowladda Somaliland iyo Midowga Boqortooyada Ingriiska iyo Waqooyiga Ireland eek u saabsana Shaqaalaha xukuumadda.
QALINKII;Axmed Cali Ibrahim Sabeyse